क्षमताकाे अाधारमा माल्दिभ्सभन्दा नेपाली खेलाडी अब्बलः किरण चेम्जाेङ | Neplays.com
By Neplays	 Last updated Dec 8, 2018
नेप्लेज । विदेशी लिगमा खेल्ने थोरै नेपाली खेलाडीको सुचिमा गोलकिपर किरण चेम्जोङ पनि हुन् । माल्दिभ्सको शीर्ष डिभिजनको लिगको उपाधि टिसी स्पोर्टस क्लबलाई जिताउन महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेका किरण सर्वोत्कृष्ट गोलकिपर समेत घोषित भए । लिग सकिएपछि उनी दुई दिन अघि (बुधबार) नेपाल फर्किएका थिए । नेप्लेजले माल्दिभ्समा उनको अनुभव, नेपाली लिग र माल्दिभ्स लिगको भिन्नता, खेलाडीको स्तर, आगामी योजनामा केन्द्रित रहेर उनीसँग छोटो अन्तरवार्ता गरेको थियो ।
कस्तो रह्यो माल्दिभ्सको लिगको अनुभव ?
राम्रो भयो । माल्दिभ्समा मेरो दोस्रो सिजन हो । पहिलो सिजनमा नराम्रो भएको थिएन । पहिलो सिजनमा पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कप जिते पनि लिग जित्न सकेका थिएनौं । तर त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कप जित्ने पहिलो माल्दिभियन टिम बन्न सफल भयो । दोस्रो सिजन त मेरो करियरको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि नै हो ।
नेपालमा करिव एक दशक लिग खेलेँ । उत्कृष्ट गोलकिपरको उपाधि पनि जितेँ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुगेर आफ्नो टिमलाई लिग जिताएँ, उत्कृष्ट गोलकिपरको उपाधि पनि जितेँ, त्यही नै मेरो लागि ठूलो उपलब्धि हो ।
यहाँको लिग र त्यहाँको लिगमा कस्तो फरक पाउनु भयो?
यहाँ कुनै प्रकारको दबाब नै छैन । एक खाले ब्यावसायिक वातावरण पनि छैन । प्रशिक्षण पनि ब्यावसायिक छैन । खेलाडीले पनि प्रशिक्षणलाई गम्भीर रुपमा लिँदैनन् । खेलाडी नआउँदा पनि सोधी–खोजी हुँदैन । प्रशिक्षणमा आउन मन लागेन भने केही समस्या प¥यो भनिदिए हुन्छ ।
तर, अन्तर्राष्ट्रिय लिगमा दबाब अर्कै हुन्छ । आफ्नो प्रदर्शनलाई लिएर खेलाडी आफैँ सचेत बनिरहेका हुन्छन् । त्यहाँ प्रत्येक दिन प्रशिक्षण हुन्छ ।
मुख्य भिन्नता भनेको ब्यावसायिक वातावरण नै हो, जुन यहाँ छैन र त्यहाँ पाएको छु ।
भारतको आई–लिग पनि खेल्नु भयो । आई–लिग र माल्दिभ्सको लिगमा चाहीँ के भिन्नता पाउनु भयो ?
खेलाडीको स्तर र क्षमताको कुरा गर्ने हो भने भारत निकै राम्रो छ । भारतमा खेलाडी ट्रान्सफरको सिमित समय छैन । त्यसैले गर्दा धेरै खेलाडी र ठूलो प्रतिष्पर्धा छ । टिममा स्थान बनाउनका लागि खेलाडीको प्रतिष्पर्धा पनि ठूलै हुन्छ । पाँच जना विदेशी खेलाडी खेलाउन पाउने भएपछि क्लबहरुले ८–१० जना विदेशी खेलाडी अनुबन्ध गर्ने र मन परेन भने विदा गर्छन् ।
तर, माल्दिभ्समा त्यो छैन । त्यहाँ क्लबले चार जनाको विदेशी खेलाडीको कोटामा चार जनामात्र अनुबन्ध गर्ने गर्छन् । लिग अवधिको कुरा गर्ने हो भने भारतमा चार–पाँच महिना मै लिग सकिन्छ भने माल्दिभ्समा १० महिना संचालन हुन्छ ।
भारतमा पनि १० महिना लिग भएको भए निकै राम्रो हुन्थ्यो । दुबै देशका लागि उत्कृष्ट छन् । तर प्रतिष्पर्धाको कुरा गर्ने हो भने भारत आई–लिग अगाडी छ ।
किरण चेम्जोङ विदेशी लिगमा खेल्नुको मुख्य कारण पैसा की करियर र सन्तुष्टि ?
मेरो लागि फुटबल सबैथोक हो । फुटबलले नै मलाई परिचय र प्रतिष्ठा दिएको हो । फुटबल खेल्न पाएन भने के नपुगेको जस्तो लाग्छ । फुटबल मेरो रगतमा नै छ र फुटबल खेल्नै जन्मिएको जस्तो लाग्छ । जति उमेर बढ्दै गयो, त्यति नै नयाँ कुराहरु सिक्न मन लाग्छ ।
त्यही भएर पनि म अन्तर्राष्ट्रिय लिगमा जान चाहेको हो । अवस्य पनि यहाँभन्दा धेरै पैसा पनि छ । तर पैसा भन्दा ठूलो कुरा मलाई चुनौतिको सामना गर्न मन लाग्छ । यहाँको लिग खेलेर मैले आफ्नो प्रदर्शनमा केही पनि सुधार गर्न सक्दिन जस्तो लाग्छ । त्यहाँ गएर राम्रो खेलेर, राम्रो अनुभव बटुलेर आयो भने मैले देशका लागि अझ राम्रो खेल्न सक्छु । साथ–साथै कतिपय खेलाडीबाट प्रेरणा लिन सक्छु । र कतिपय खेलाडीलाई प्रेरणा दिन पनि सक्छु ।
माल्दिभ्सको लिग सकियो, नेपालमा लिग चलिरहेको छ । यहाँको लिग खेल्ने इच्छा छ की छैन ?
मैले यहाँ लिग नखेलेको झण्डै पाँच वर्ष भइसक्यो । नेपाली भएपछि नेपालको लिग खेल्न त मन लाग्छ नै । कतिपय समर्थकले पनि मलाई यही प्रश्न गरिरहेका छन् ।
तर अहिलेसम्म मलाई कसैले खेल्नका लागि प्रस्ताब गरेको छैन । कुनै राम्रो टिमबाट राम्रो प्रस्ताव आयो भने किन नखेल्ने ?
थ्रीस्टारबाट लामो समय खेल्नु भयो, अब त्यहाँबाट खेल्ने इच्छा छ की छैन ?
नेपालको एउटा उत्कृष्ट टिम, लामो समय मैले विताएको क्लब । बोलायो भने खुसीका साथ खेल्नेछु । फ्यानहरु पनि खुसी हुन्छन् होला ।
अबको योजना के छ ? अहिले नै कुनै क्लबबाट प्रस्ताव आइसक्यो की ?
सायद विदेश नै जान्छु । अहिले नै नभनौं । अहिले ब्रेक छ । जनवरीमा ट्रान्सफर मार्केट पनि खुल्छ । माल्दिभ्समा चाहीँ फेब्रुअरी लिग सुरु हुने हो तर राजनीतिक कारणले गर्दा केही समय चार महिनाजति ढिला होला जस्तो छ । तर बाहिरै गएर खेल्ने योजना छ ।
कुन कुन देशमा जान सक्ने सम्भावना छ ?
यसको बारेमा अहिले कुरा नगरौं । तर म अहिले यति कुरा भन्छु की म बाहिरै जान्छु ।
भारत फर्किने की नफर्किने ?
भारतमा पनि मिनर्वाबाट सम्पर्क भएको थियो । माल्दिभ्समा हुँदा नै सन् २०२० सम्मका लागि अनुबन्ध गर्नका लागि प्रस्ताव आएको थियो । तर त्यहाँ केही समझदारी भएन । अहिले चाहीँ भारतको कुनै क्लबबाट प्रस्ताव आएको छैन ।
भारतमा अझै पनि लिग जारी छ । केही खेलहरु बाँकी छ । कतैबाट प्रस्ताव आयो भने जान सक्छु ।
माल्दिभ्सका स्थानीय खेलाडीहरु कस्ता छन् ?
हाम्रो टिम (टिसी स्पोर्टस क्लब)मा स्थानीय खेलाडीहरु राम्रै छन् । अलि अस्फाक छन्, जो यो लिगको सर्वाधिक गोलकर्ता समेत हुन् । दुई–चार जना राष्ट्रिय खेलाडी पनि छन् । केही टिममा उत्कृष्ट खेलाडीहरु छन् । तर हाम्रो टिममा उदयीमान खेलाडीको बाहुल्यता छ । तर माल्दिभ्समा भन्दा नेपालमा राम्रो क्षमता भएका खेलाडी देखेको छु ।